အခုမှ စာရေးစာဖတ်သင်နေရသလိုပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ရေးတတ်ဖတ်တတ်ပါပြီ။ website တွေကို database နဲ့ ပြတာ အတော်မိုက်ပါတယ်။ အင်တာတိန်းမန့်အနေနဲ့ဆော့တာပါ။
user role, author role နဲ့ admin role ခွဲတာ website ကို dynamic အနေနဲ့ database ကနေထုတ်ပြတာ data တွေကိုသွင်းတာ အတော်စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
website လွှင့်ဖို့ service တချို့ဝယ်ယူခဲ့ပြီးပေမယ့် ဈေးချိုလို့ Share Dedicated server ဖြစ်နေမယ် တွေးခဲ့မိတာရှိပါတယ် တကယ်လည်း share ဖြစ်နေတော့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ IT လိုင်းကိုလေ့လာတာ လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ်လုပ်လျင် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များသာ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ခုဆို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ် အချက်အလက်တွေဟာ ဒုက္ခပေးနိုင်သလဲ နည်းနည်းနားလည်သလောက်ရှိပါပြီ။
Input form တွေလုပ်ရာမှာ script တွေရေးတာလိုသွားရင် database ကို ဝင်အမွှေခံရမယ့် ကုဒ်တချို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဟက်ကာများ ps အလွယ်ရသွားနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်။
html နဲ့ css ပိုင်ရင်ပဲ website ဒီဇိုင်း စိတ်ကြိုက်ဆွဲနိုင်ပါတယ် server front end language ဖြစ်တဲ့ php မှာ html ထည့်နိုင်သလို database ထည့်မယ်ဆိုserver language ဖြစ်တဲ့ SQL Language လဲလိုပါတယ်။
database နဲ့ပတ်သက်လို့ Mogodb လည်းတွေ့ရပေမယ့် ဆက်လေ့လာဖို့ဆန္ဒမရှိပါ။
အချက်အလက်တွေ ခဏခဏတောင်းတတ်တဲ့ မြန်မာ အစိုးရဌာနတွေမှာ ဝန်ထမ်းရဲ့အချက်အလက် တခါယူပြီးတာနဲ့ database မှာထည့်ထားတာနဲ့တိုက်စစ် account တစ်ခုပေး လိုက်ယုံနဲ့ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် update လုပိနိုင်မယ့်အချက်အလက်တွေ နဲ့အချိန်ကုန်သက်သာစေသလိုပါပဲ။ လက်တွေ့မှာ တော့ ဒီ code တွေကို ဘယ်လောက်ပြီးပြည့်စုံအောင်ရေးနိုင်မလဲ။ လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကရောအိုကေပါ့မလား။ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဒါပြဿနာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရွက်ထက်တော့ လုံခြုံမှု နည်းနေပါအုံးမယ်။ bank တွေ နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ရတာလည်းသိပ်မလွယ်သေးပါ။ bank acc တွေ လုံခြုံမှုနည်းနေသလားလို့ဗျာ။ ps တကြိမ်တည်းနဲ့ ငွေလွှဲလို့ရတာ သိပ်မကြိုက်ပါ။
သာမန်းစားသောက်ဆိုင်တွေ Online Store တွေ အတွက်အလွယ်ရေးနိုင်ပါတယ်။ Online Platform. Market Place တွေအတွက် shopping cart က နည်းနည်းပြဿနာရှိပါလိမ့်မယ်။
Posted by မင်းညို at 7:20 AM0comments
ခေတ်သစ် သင်ပုန်းကြီး ကိုလေ့လာခြင်း
Databased Driven Website (Dynamic Website)
ဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့ သုံးစွဲသူတောင်မရိပ်မိပဲအများနဲ့ Share သုံးရတဲ့
Share Hosting, တွေ
Virtual Dedicated Server, (Virtual Private Server),
စတဲ့ Knowledge လေးတွေ တလအတွင်းသိခဲ့သလို။
Platform တစ်ခု ဆောက်ဖို့ စမ်းကြည့်နေတာ ပထမ Homepage နဲ့ Login, Register အဆင့်ပဲရှိပါသးတယ်။ Multi-users တွေအတွက် Login account တွေပေးရမှာပါ။ Admin နဲ့ user တွေကြား Role ခွဲရမှာလည်းရှိပါတယ်။ Online ဆရာတွေကောင်းတော့ လေ့လာရတာမကြာသေးပေမယ့် အတော်ခရီးရောက်ပါတယ်။ လေ့လာလိုက် ရေးလိုက်ပါပဲ။
ဖရီးရတဲ့ Wordpress Theme တွေသုံးရင် ဒီအပိုင်းကို ခဏနဲ့ပြီးနိုင်ပေမယ့် ပြဿနာတွေကို အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့က Script တွေကူးချယုံနဲ့မရပါဘူး။
အားကျစရာကောင်းတာက Online Video တွေထဲက Developer တွေဟာ php, js,server တွေဖွင့် ဟိုဖက်ဒီဖက် ချိတ်ဆက်ရင်း script တွေရေးသွားတာမြန်ချက်ဗျာ။ အားကျစရာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဘွဲ့ရပြီး ၈ နှစ်ကျော်မှ စာရေးစာဖတ်တမျိုး သင်နေရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ :D
ဘာမှမတတ် မသင်ခဲ့ရပဲ ရမ်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒီ Blog လေးကိုတော့ ဒီတိုင်းပဲ ဆက်သုံးပါမယ်။ မပြင်တော့ပါဘူး။ နေ့ညအချိန်ယူပြီး Nav တွေ Sidebar Script တွေ တစစီထည့် ပြီး ဆက်စပ်ဖန်တီးခဲ့တာမို့ တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။ Template တွေကူးယူဖန်တီးခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
Posted by မင်းညို at 7:08 AM0comments
ဖေဖေဘာလို့ဒါလောက်အိပ်နေတာလဲ လိုက်မပို့ရင် သွားတော့မှာ။ ဗုဒ္ဓေါ ကျောင်းသွားဖို့တက်ကြွနေပါလား။ အံ့သြစရာ။ frozen ဂါဝန်လေး ဝတ်ချင်တယ်။ ဘောင်းဘီက ဒါဝတ်မယ်။အော်လူကြီးပြောတာ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် လက်ခံတတ်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးကိုး။ အသက်က ခုမှ သုံးနှစ်ကျော် စကားပြောတတ်စ။ (တကယ်တော့ ချောင်ချောင်ချိချိလေးတွေသူကြိုက်) ဖိနပ် အကျီ င်္ အသုံးအဆောင်ကအစ သူလိုချင်တာပဲ ရွေးယူတယ် ဝယ်ပေးလည်းမရ။
ဒယ်အိုးလေးတွေလိုချင်တယ် ကစားကွင်းနားမှာရှိတယ် (Ocean) ကကစားကွင်းသွားရင်းတွေ့လာတာ သတိရလို့ပူဆာ။ ဟင် ကြမ်းပေါ်ပုံထားတဲ့အရုပ်မနည်းဘူးလေရှုပ်လိုက်တဲ့အမှိုက် ဝယ်ထားတာတွေနဲ့ဆော့ကွာ။ မရဘူး မရဘူး။
ဘာဘီရုပ်ခေါင်းဖြီးပေးတာဆို သိပ်လှတာလေ။ (အကြီးမ ပထမတန်းကျောင်းသူ ဂျင်းဝင်ထည့် သူလိုချင်တာလေ။)
အိုခေလေ ညည်းစုထားတဲ့ပိုက်ဆံ များနေပြီပဲ မှန်းစမ်း ဟိုနေ့က ဘဘ လည်း မုန့်ဖိုးပေးသွားတာပဲ။ ငါတို့သုံးယောက် တက္ကစီခေါ်ပြီး သွားကြမယ် ဒီပိုက်ဆံလောက်ဆို ဂစ်တာလေးတွေရော အရုပ်ရော အိုးခွက်တွေပါဝယ်လို့ရတယ်။ သူ့အိတ်ဖွင့်ကြည့် အကြီးမ လိုက်လု မရဘူး မရဘူး။ မီးငယ်လေးတွေ့လား မမမှာ ပိုက်ဆံအများကြီးရှိတယ် သူ့ဆီသွားချွဲငါတို့သွားကြမယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူ့လို ပိုက်ဆံစုမလား ရော့ တရာယူ။ ကိုယ်အိတ်နဲ့ကိုယ်သိမ်းထား။စု ပြီးရင်အရုပ်ဝယ်လို့ရပြီ။
Posted by မင်းညို at 6:43 AM0comments
Mark Zukerberg နဲ့ယှဉ်မိခဲ့တဲ့ စိတ်ကူး
2004 မှာ Mark Zukerberg Facebook ကို စတင်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက် အဝ စသုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလပါပဲ။ သို့သော် facebook ကိုမသိ။ ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း မှာ လူငယ်တွေ အင်တာနက်သုံးဖို့ ဖွင့်တဲ့ကာလပေမယ့် စာအုပ်ရှားပါးတဲ့ကာလ စာရှာဖတ်တာတွေ လုပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
2004 မှာ ကျွန်တော်တို့ကြားခေတ်စားတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတော့
hi5, friendster လောက်ပါပဲ skype သုံး သလိုပဲ နောက်ပိုင်း ဖိတ်တဲ့လူရှိမှရတဲ့ gmail gtalk သုံးတယ် mail4u က အီးမေးလျောက်လွှာတင်ရောင်းစားနေတဲ့အချိန် ဖရီး gmail ရတာ ပျော်စရာပါ။ဂူဂဲမှာ pdf တွေ ppt ဖိုင် type တွေသီးခြားခွဲထုတ်ရှာကြသလို Boolean Algebra သုံးရှာတာလည်းရှိတာပဲ။
ရေနံဘာသာရပ်အတွက်အသုံးကျတဲ့ Calculation တွေကို online calculation ဝက်ဆိုဒ် လေးတွေ့တာ ရွှေပါပဲ သုံးထားတဲ့ Equation လေးတွေပါဖော်ပြသလို Reference Paper လေးတွေပါဖော်ပြတယ်။ ဒီ paper တွေက မြန်မာပြည်အနေနဲ့ရနိုင်ဖို့မလွယ်သလို ဝယ်လည်းဖတ်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။ Problem တစ်ခုရဲ့ မူလ သုတေသနအလုပ်တွေဖော်ပြသလို နောက်လုပ်သူတွေလည်းဖော်ပြတော့ မိုက်ပါတယ်။ အက်တာနက်ဟာ အခွင့်အလမ်းတွေပေးတာ အသေအချာပါ။
Posted by မင်းညို at 4:55 PM0comments
သုံးနှစ်ကလေးတယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ဟာပွင့်လင်းပါတယ်။ သူဆွဲတဲ့အခါ သူဟာ အမေအနားမှာရှိနေပြီး သူ့အစ်မဟာ အဖေအနားကို နေရာပေးထားပါတယ်။ နားရွက်မှာ ချိတ်စရာတွေပါတာ သူ့အမေပုံပါ။ အကြီးကဆွဲတဲ့ပုံတွေမှာ အမေက သူနဲ့ရှိနေပြီး အဖေက အငယ်လေးနဲ့ရှိနေပုံ အမြဲဆွဲပါတယ်။ သူ့အမေ ခန္ဓာကိုယ်ကနေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ အစိတ်အပိုင်း သူဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းမို့ မိခင်ကို ချစ်စိတ်ရှိတာ သဘောကျပါတယ်။
အရွယ်အစားကွာခြားချက်တွေထည့်ဆွဲတာတွေ့ရပြီး အဖေဟာ ဆလင်းဖြစ်သူပါ။ သူဟာ အစ်မထက် အကောင်သေးတာလည်း သိနားလည်ပြီးပါပြီ။ အိမ် ပြတင်းပေါက် တံခါး ပန်းပွင့်တွေဟာ သမီးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကူးပုံရိပ်ထဲက လွှမ်းမိုးတဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ရေကန်မှာတွေ့တဲ့ တကောင်ထည်းသော မန်ဒါလီဘဲကိုလည်း သူမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေက အငယ်လေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့လာကြည့်မိသလောက်ပေါ့။
Posted by မင်းညို at 1:21 PM0comments
Labels: အမှတ်တရများ, ထွေထွေရာရာ
ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝ အောင်မြင်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ
လူတွေနေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ အရာတွေ ယာဉ် ယန္တရားကြီးတွေ စားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရှင်သန်နေရတဲ့ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်တွေ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတာတွေနဲ့ ချိန်ဆ ကြည့်မိတဲ့အခါ လူ့အသက်ဟာ တဲတဲလေးပါလားလို့ နားလည်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရအနေနဲ့ fragile ဖြစ်တယ်လို့ သုံးမလားမသိ။ နုနယ်လွန်းလှတယ်။ ခံနိုင်ရည်မရှိဘူး။ စာအရရေးရရင်တော့ ပေါ့ပါးသလိုရှိပေမယ့် သတိနဲ့ဆင်ခြင်တွေးတောတဲ့အခါ တကယ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ အထိခိုက်မခံဘူး ပျက်စီးဆုံးရှုံးဖို့ အလွယ်လေးပဲ။
သက်တမ်းအားဖြင့်လည်း တိုတောင်းလွန်းလှတယ်လို့ သိလာတယ်။ ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နှစ်ကာလတွေဟာ သိပ်မကြာသလိုပဲ ဘာတွေ လုပ်ဖူးလဲ လုပ်ပြီးလဲ တွေးတဲ့အခါ မနေ့တနေ့က ဖြတ်ခဲ့ရသလို ဘာမှမကြာခဲ့ဘူး။ သမားရိုးကျမိဘ ဘိုးဘွားတွေ ကိုယ့်လက်ပေါ်တင် ဘဝကူးခဲ့သလို ဖြစ်မယ်ဆို နောက်ထပ် ကျန်နေတဲ့သက်တမ်း ဘာမှမကြာပဲ ကုန်ဆုံးမယ့်သဘောပဲ။
ဒီနေရာမှာ ဘဝဆိုတာ ရုန်းကန်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် နောက်တမျိုးပဲဖြစ်မလား ရှိလာတယ်။ ကိုယ်တွေးတဲ့အပေါ်မူတည်တာပေါ့လေ။
ရုန်းကန်မှုတစ်ခုသာ ဘဝရဲ့ အရသာအနေနဲ့ရှိလာမယ်။ ရုန်းကန်မှုမရှိပဲ သက်သာလွန်းစွာနေထိုင်ခြင်းဟာ ဘဝကို အရသာမပါပဲမျိုချလိုက်သလိုပဲဖြစ်မှာပါ။ ကဲကွာ ဆန္ဒပြုလိုက်သမျှ အသပြာတွေ ဝင်ကြည့်စမ်း။ ဆန္ဒပြုလိုက်သမျှ တိုက်တာ နေအိမ် ကား ရွှေငွေ ဝင်ကြည့်စမ်း ကိုယ်ပြောလိုက်သမျှ ဖြစ်ကြည့်စမ်း။ ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ့်အနှစ်သာရ အရသာမဲ့တဲ့ ဘဝပဲ။ ရုန်းကန်တယ်ဆိုတဲ့ အရသာကို ခံစားလိုက်ပါ။
ဒေါသတွေရှိနေတာအတွက် နောင်တရပူပန်မနေနဲ့။ မောဟတွေရှိနေတာအတွက် စိတ်ဒုက္ခရောက်မနေနဲ့။ လောဘတွေရှိတာအတွက် ခွင့်မလွှတ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့။ ဗျာပါဒ ဆိုတဲ့ စကားတလုံးက အဲဒါတွေကို ချုံ့ပစ်တယ်။
ဒေါသရှိလို့ လောဘရှိလို့ အတင်းအကြပ်ဖြုတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားရင်း ဝဲသြဃထဲ ရေတိမ်နစ်နေဆဲ တပုံရှိ။ ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်လို့မရသေးသလို မဖြုတ်ရကောင်းလားလို့ တပါးသူရဲ့ အခွင့်အရေးအပေါ်မှာပါ ဒေါသတရား ထပ်ပွားတယ်။ ဝေဝေးဝါးဝါးလုပ်နေရကောင်းလားလို့တောင်တောင်အီအီတွေးတောရင်း မောဟ ရဲ့ အနက်ဆုံးအပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရောက်လာတယ်။ ဒီကောင်လောဘ ရှိရကောင်းလားလို့စဉ်းစားရင်း အတ္တနဲ့ပေါင်း ကိုယ့်လောဘကိုယ်မသိဘူး။
အကောင်းဆုံး စိတ်အခြေအနေ တခုဟာ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဟုတ်တာသေချာတယ်။ တစ်ခုသိရမှာက အများလက်ခံနေတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု စိတ်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာနေသရွေ့ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလည်း ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ပြေလည်မှုကိုရှာနေသရွေ့ မပြေလည်မှုက ရှိနေမှာပဲ။ လူ့သဘာဝ ပြေလည်မှု ဆီကို သူ့ဘာသာရွှေ့တတ်တယ်။
ဗျာပါဒ ကို နိဝရဏ ပိတ်ပင်တတ်တဲ့ အရာလို့ နားလည်ရင်တော့ Key တစ်ခုရှိတာတွေ့လိမ့်မယ်။ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ ဗျာပါဒ မဝင်စေနဲ့။ လုပ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေအပေါ် နောင်တတွေထွေးပိုက်မထားနဲ့။ မဖြစ်သေးတာတွေအပေါ် ထားစရာမလိုအပ်။ အောင်မြင်တဲ့ လူသားဖြစ်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ကန့်လန့်ကာဟာ ငါးမျိုးပဲရှိတယ်။ ပိတ်ပင်တတ်တဲ့အရာ ငါးမျိုးပဲရှိတဲ့ အထဲ နှစ်မျိုးလွတ်ရင်ပဲ တကယ့်လူသား။
လွတ်တယ်ဆိုတာမမျှော်မှန်းရင်တောင် သုတမယ လောက်နဲ့ ကမ္ဘာမြေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ သီးပွင့်နေပြီ။
ဗျာပါဒ အပေါ်သတိတရားရှိခြင်းက လက်မြှောက်အရှုံးပေးတာမဟုတ်။ ဒါက စကားချပ်။ လူသားသမိုင်းမှာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးမှု ဆိုတာမရှိဘူး။ (ဒီနေရာမှာ စောဒက တက်စရာ မေးခွန်းရှိနိုင်ပေမယ့် မရေးတော့)။
ဒေါသ လောဘ မောဟ ဟာ ပါဝင်သူတွေအပေါ် အလုံးစုံ ပျက်စီးရေးလို့ နားလည် လက်ခံပြီးသူတွေသာ ဒါဟာဖတ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိမယ်။ မဟုတ်ရင် မမေးနဲ့ မေ့လိုက်ပါ။
လောဘ ဒေါသ မောဟ လျော့နိုင်သမျှ လျှော့ရင်း သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဘဝတွေတည်တောက်နိုင်စေဖို့ပဲရည်ရွယ်တယ်။ လောဘကိုသတ်လို့ သေစရာအကြောင်းမရှိဘူး လောဘပျောက်သွားစရာအကြောင်း မရှိဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင် လောဘတရားဟာ လူသားတွေအပေါ်မှာကြီးစိုးတယ်။ လျော့သွားတဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း ရှိသင့်သလောက် (တကယ်တော့ ရှိသင့်သလောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး) ပဲရှိလာပြီး မိတ်ဆွေတွေ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ကျယ်ပြန့်လာမယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်လာမှာပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ လောဘသတ်သတ် လောဘ သေမသွားသေးတဲ့အတွက် အတ္တ ငါစွဲ ငါ့ဟာသဘောအရ သူ့ထွက်ပေါက်အတွက် လောဘဟာ ရှာနေတုန်းပဲ။
တစ်ခုပါပဲ လောလ ဒေါသ မောဟ လျော့ခြင်းဟာ လက်ရှိ အကျိုးကို လုံးဝ မထိခိုက်စေတဲ့ အပြင် ပိုတိုးပွားတဲ့ အကျိုးစီးပွား ရလာမှာ အသေအချာလို့ပဲပြောပါရစေ။ ပိုကောင်းဖို့ လျော့လိုက်ပါ။
မိမိရောက်ရာအနေအထားအပေါ် မကြေနပ်သူတွေ လောဘဒေါသမောဟ ဖြုတ်ပစ်ရင်း ထပ်ဆင့်လောင်း ကြီးလာသူတွေ လောဘသည်သာ လတ်တလောအကျိုးစီးပွား အပေးနိုင်ဆုံးမြင်နေသူတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေအပေါ်နောင်တတရား မဖြစ်သေးတာတွေအပေါ် ဗျာပါဒတရားရှိသူတွေအတွက်ပါ။
Do right things. အယူအဆ နဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
Do things right. အယူအဆနဲ့ လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း အတ္တ သက္ကာယ ကိုယ်ကိုအမှီပြုပြီး တမျိုးတဘာသာ နူးညံ့တဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ တရားတွေ ရှိနေတာကြောင့်ပါပဲ။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လောက တည်ဆောက်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့အမြင် သမ္မာဒိဌိတရား ရှိဖို့ လိုသေးကြောင်း သတိပေး လက်တို့တာပါ။ သတ္တဝါတမျိုးဖြစ်တဲ့ လူကို နားလည်ခြင်း အကြောင်းပါ။
ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေတိုးတက်သလို စိတ်ချမ်းသာမှု ညွှန်းကိန်း မြင့်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေဖို့ပါပဲ။
Posted by မင်းညို at 7:42 AM0comments
အသက် (၃၀) အရွယ် ချာတိတ် (၃၀)
1915 ခုနှစ်မှာမွေးပြီး 1947 ခုနှစ် အသက် (၃၂) နှစ်အရွယ်မှာသေဆုံးခဲ့တဲ့ လူငယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ဟာ မြန်မာပြည်ကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ စနစ် ကို ပြောင်းသွားစေတယ်။
အမြင်မှန် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူတို့ထက်ကြီးတဲ့ ပညာသမ္ဘာရင့်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံကူညီမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့။
ယနေ့ထိ မြန်မာပြည် လူဦးရေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ သူ့တို့ကိုဦးခိုက်ကြတယ်။ သူ့တို့ကိုတမ်းတကြတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ (၃၂) အရွယ် လူငယ်တွေပါပဲ။
သူတို့ အဖွဲ့ ဘယ်လောက်များလဲ။ အယောက် (၃၀) ထဲပါ။ မရိုသေစကားပြောသလိုဖြစ်သွားမလားစိုးရိမ်မိလောက်တဲ့ စကားတလုံးသုံးကြည့်ချင်တယ်။ ချာတိတ်တွေပါ။
ကဲ (၃၀) စွန်းစွန်း အယောက် (၃၀) လောက်ရှေ့ထွက်ခဲ့ပါ။
Posted by မင်းညို at 10:51 PM0comments
နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဖက် အာကာသတွင်းနက်က Source တခုထဲကနေအဖန်တလဲလဲလာနေတဲ့ Signal တွေ FRBs တွေ နာဆာဟာဖမ်းယူရရှိနေပါတယ်။
အာကာသတနေရာက သက်ရှိတို့ရဲ့ အချက်ပြတွေလား မသေချာပေမယ့် ကမ္ဘာနဲ့ရာသီတုဆင်တူတဲ့ဂြိုလ်တွေကို နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြင်ဖက်မှာ အတော်များများ တွေ့နေပြီးပါပြီ။ လက်ရှိ အာကာသနည်းပညာနဲ့ နေအဖွဲ့အစည်း အပြင်ဖက်ရောက်အောင်သွားဖို့ခက်ခဲနေဆဲပါပဲ။
လူမလိုက်ပါပဲ နှုတ်ခွန်းဆက်ဘာသာစကားမျိုးစုံထည့်သွင်းထားတဲ့ စီဒီတွေပါတဲ့ စူးစမ်းရေးယာဉ်ကို နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဖက်ကို လွတ်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကြယ်တွေဆီသွားဖို့ ခေတ်သစ် ကိုလံဘတ် တွေကြံဆနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ အလင်းအလျင်နဲ့သွားရင်တောင် အနည်းဆုံး လေးနှစ်ခန့်အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပြီး အလင်းအလျင်နဲ့သွားတဲ့ယာဉ်မရှိသေးပါဘူး။ အာကာသခရီးထွက်ဖို့ နှေးကွေးလွန်းတဲ့လူသားတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယာဉ်ပေါ်မှာ သားဖောက်ပြီး ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သွားကြမလားစဉ်းစားတာလည်းရှိပါတယ်။
စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်လွန်းပေမယ့် လိုက်ပါလိုတဲ့သူတွေ စာရင်းပေးကြသတဲ့။ အာကာသထဲ သားဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကား တမြန်နှစ်က ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရယ်ကြတာပေါ့။ :D ဒီလူတွေနှယ် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အာကာသ သွား သားစပ်ရတယ်လို့ပေါ့။ :D
အာကာသတွင်းနက်မှာစုပ်ယူခံရမယ့် စကြာဝဠာရဲ့ အဆုံးသတ်တနေ့အတွက် (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့သက်တမ်း 4.5 billions years နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် မဝေးလှတဲ့အနာဂတ်မှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးလာမယ့် လူဦးရေ သဘာဝသယံဇာတ လိုအပ်ချက် စွမ်းအင် အာဟာရလိုအပ်ချက်တွေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့ နာဆာနဲ့ပညာရှင်များ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖွံ့ဖြိုးနေကြတာ စစ်အေးခေတ်လွန်ကာလတွေကတည်းကပါပဲ။ ကြာသပတေးဂြိုလ်ရဲ့ အကူအညီဆွဲငင်အားနဲ့ လူသားတွေဘေးဥပါဒ်ကျနိုင်လောက်တဲ့ဥက္ကာခဲတွေ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဆုတောင်းကောင်းယုံ စိတ်ကူးယဉ်လောက်စရာ ကြယ်ကြွေလေး တချို့သာ ၁၅ မိနစ်တစ်ခါလောက် ညပိုင်းမှောင်မိုက်တဲ့ကွင်းပြင်ကျယ်တွေကနေမြင်တွေ့နေကြရမှာပါ။
အနာဂတ်ကမ္ဘာဟာ ဘယ်ကိုသွားမလဲမသိသလို ဒါဝင်ရဲ့ အီဗော်လူးရှင်းကြီးကရော အသက်ဝင်နေတုန်းပဲလား။
ကမ္ဘာဖျက်လက်နက်နျူကိုက်ဟန်ရေးပြကြပေမယ့် အကြမ်းဖက်သမားတွေကလွဲလို့ တကယ်သုံးဖို့ဘယ်နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်းမှမစဉ်းစားခဲ့ကြပါ။
သဘာဝ အာကာသအန္တရာယ်တွေ တကယ့်တကယ်ဖြစ်လာရင်ရှောင်လွှဲမရတာ စိုးရိမ်စရာရှိတာ မြေကမ္ဘာရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ပါပဲ။ ဝေးဝေးတွေးတတ်တဲ့သူတွေအတွက် သေးသေးလေးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ ကျွန်တော်တို့ဆီဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ 135 မျိုးလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ သေးသေးလေးဖြစ်တဲ့ ဒီကွဲပြဲမှုက တကယ်ပဲ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြတော့ဘူးလား။ အင်မတန်ရယ်စရာကောင်းသလိုပါပဲ။ သဘာဝတရားနဲ့ဖြစ်တည်မှုအလိုအလျောက်သဘော သုံးမျိုးသောဥတု နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့မြေဆီလွှာ သောက်လို့ရတဲ့မြစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာဟာ ဒီနေရာလုမှုတခုနဲ့တင် အစစ အရာရာနိမ့်ကျနေတော့မှာလား။ တနေ့ထမင်းသုံးနပ်ထက်ပိုစားချင်သလား ထိုင်ခုံနှစ်လုံးတပြိုင်တည်းထိုင်ချင်သလား အိပ်ယာ ငါးခု တပြိုင်တည်းအိပ်ချင်သလား။ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၆၀ ခန့်သာရှိတဲ့မြန်မာပြည်လူသားတွေ ဘာတွေစဉ်းစားပြီး မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေကြသလဲဗျာ။ ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖြတ်သန်းပြီးပြီလဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြအုံး။ ၁၀ နှစ်ဆိုတာ ခဏလေးဗျာ။
ကြီးကြီးလုပ်ချင်ရင် ဝေးဝေးတွေးကြဗျာ။ ကမ္ဘာ့အရေးကိစ္စတွေမှာ မြန်မာဟာ အသံတသံတောင် မထွက်ပေမယ့် အိမ်တွင်းမှာ အင်မတန်နားဆူပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရေးကိစ္စတွေ တခွန်းမှဝင်မပြောရဲကြသလိုပါပဲ။ ဒါကလည်း မာကက်တင်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ပိုက်ရှိတာမရှိတာ နည်းပညာထွန်းတာမထွန်းတာအသာထား ခေါင်းတောင်ထောင်မကြည့်ရဲတဲ့နိုင်ငံကို အစည်းအဝေးကွန်ဖရင့်တွေမှာ အလေးမထားကြတာ အဆန်းတော့မဟုတ်။ ဘယ်သူမှအလေးမထားတော့ ဘယ်သူမှ မလာကြဘူးပေါ့ဗျာ။
ကမ္ဘာ့အရေးတွေဝင်ဆံ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာလိုအပ်ပါတယ်။ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်သာ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဝေဖန်လိုက်ပါ။ ကိုလိုနီစနစ် တိုက်ပွဲစနစ်နဲ့ကျွန်ပြုဖို့ အိုင်ဒီယာ ဒီခေတ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှမသုံးတော့ဘူး။ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းတွေထဲ ဝင်ပါလိုက်ပါ။ ဝေဖန်ကြတာကို ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ယုံလောက်နဲ့ ဆရာကျမနေကြပါနဲ့။
စစ်ပွဲထဲပါခဲ့ပြီးစစ်ကွင်းအပြင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်က ယနေ့စူပါပါဝါရှိနေပါတယ်။
တခါတရံ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်ကြည့်ရ ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါကလည်းအပြောင်းအလဲပေါ့။ :D စစ်မဖြစ်ရသေးဘူး ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်ရတာအရင်ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မီးကတော့ ဘယါတုန်းကမှမငြိမ်း။ ဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြည့်ကြဗျာ။ :D ခပ်စွာစွာကောင်ဆို ဒေသထဲကကောင်တွေ သိပ်မအာရဲတော့ဘူးပေါ့။ :D ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းလေးတွေလည်း လက်သွေးရတာပေါ့ဗျာ။ :D မဟုတ်လည်းပြည်တွင်းစစ်က ငြိမ်းမှမငြိမ်းတာ နယ်စပ်ဒေသတွေ အမြဲစစ်ဖြစ်နေတာပဲ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအတွက် ထုတ်မပြောသင့်တဲ့ ဗျူဟာတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် :D တပ်မတော်ရဲ့ အရည်အသွေး ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့လတ်တလော အရေးကိစ္စထွက်ပေါက်များဖြစ်မလားမသိ။ :D ရှုံးသွားလို့နယ်အသိမ်းခံရမှာ သိပ်မကြောက်ပါနဲ့။ ကိုလိုနီစနစ်မရှိတော့ဘူး ခဏနေပြန်ပေးရတာပဲ။ :D :D
မြန်မာပြည်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကာလတလျောက် ရာဇာဓိရာဇ် နဲ့ နှစ် (၄၀) မွန်မြန်မာစစ်ကနေ အခု တပြည်လုံး တိုင်းရင်းသားစစ်ပွဲပေါင်းစုံဆင်နွှဲနေတာ ခုကာလကို နှစ် ၆၀ စစ်လို့ပြောရမလားပဲ။ တပြည်လုံးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးပြီဆို နယ်ချဲ့ကြတာပဲ။ သံသယရှိတာက မြန်မာပြည်က မီးလျှံကြား ပေါက်ပွားတဲ့ မျိုးစိတ်များ ဖြစ်နေသလားပဲ။ :D
မီးလျှံကြားမှာ ပေါက်ပွားတဲ့အဏုဇီဝပိုးဟာ ရေအေးထဲမှာ သေပါတယ်။ မရှင်သန် မကြီးထွားပါဘူး။ ရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကောင် သိုင်းသင်ပေးရင် အဆင်ပြေမလားလို့။ :D (တကယ်မဖြစ်တောင် စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ် ထရန့်လိုပေါ့ :D ) :D :D
(စစ်ပွဲ အားပေးသူမဟုတ်ပါ။) :D :D
အဆင်ပြေလွန်းတဲ့ ရေ မြေ လေ ရာသီဥတုမှာ ရှင်သန်ပေါက်ပွားတဲ့ မျိုးစိတ်တွေဟာ ပျော့ညံ့ပါတယ်။ မြန်မာတို့အတွက် ရာသီဥတု ရေမြေ သဘာဝဟာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ လွယ်ကူလွန်းပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ကန္တာရတွေ မရှိသလို နေ့စဉ်ရှင်းနေရတဲ့နှင်းခဲရာသီဥတုမရှိ မျိုးစေ့တွေ ပစ်ချလိုက်ယုံနဲ့ ပေါက်ပွားနိုင်တဲ့ စားစရာသီးနှံတွေရတယ်။ လွယ်ကူလွန်းတဲ့ရေခံမြေခံ ရာသီဥတုပါပဲ။ ဘယ်မြစ်က ခပ်သောက်သောက် သောက်လို့ရတဲ့ pH7နီးပါးရေချိုတွေထွက်တယ်။ သဲကြမ်းတထပ် ကျောက်တထပ် မီးသွေးတထပ် အိတ်ထဲထည့် မြစ်ရေလောင်းချတာနဲ့ ကြည်လင်တဲ့ရေတွေရတယ် UV မီးချောင်းထွန်းပေးလိုက်တာနဲ့ ရောဂါပိုးတချို့သတ်ပြီး ရေသန့်ဖြစ်ပြီ။ ထမင်းအိုးထဲထည့်ချက်လို့ ဝါမသွားရင်ရေသန့်ပဲ အခုရောင်းစားနေကြတဲ့ရေသန့်တွေပါပဲ RO နည်းကတော့ ထားပါဗျာ။ :) ဧရာဝတီမြစ် ချင်းတွင်းမြစ်က ရေတွေက အဲဒီလိုပါ။ (မြစ်ရေကို ရေသန့်ထုတ်ရောင်းခွင့်မရှိ :) )။ အကျီ င်္မပါပဲ နေလို့ရတဲ့ရာသီဥတု နဲ့ အခင်း အမိုးအကာမပါပဲ အိပ်လို့ရတဲ့ ရာသီဥတုတွေရှိပါတယ်။
လွယ်ကူလွန်းတဲ့ရေခံ မြေခံနဲ့ ရုန်းကန်မှုမရှိတဲ့ဘဝတွေ ပိုင်ဆိုင်ရတာက မြန်မာတွေကို တီထွင်မှု အလေ့မရှိဖြစ်စေပါတယ်။ အားနေ အချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။
လက်ရှိ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ပါးမှုတွေက စနစ်ကြောင့်ပါ။ ရေခံမြေခံအရ သက်သာလွယ်ကူပြီး အလွယ်တကူရှင်သန်နိုင်တဲ့ Easy Life တွေပါ။ ဖြစ်သလိုနေလို့ရ အသက်ရှင်လို့ရတဲ့ ရေခံမြေခံတွေက ဖြစ်သလိုနေကြရင်းနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်လာကြတာပါပဲ။
အနိဌာရုံ အများစုဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ နေချင်သလိုနေကြတာကြောင့်လို့ အိန္ဒိယက ပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ နေချင်သလိုမနေကြဖို့ ပညာပေးတွေလိုပါလိမ့်မယ်။ စည်းကြပ်မှုတွေလိုပါလိမ့်မယ်။
စနစ်ပြောင်းနဲ့လူရာဝင်ဆံ့တဲ့ ခေါင်းဆောင် မျိုးဆက်များ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နှင်းကျတဲ့ဒေသ နှင်းတွေပုံနေတာ အမှိုက်ဖြစ်သလို မိုးများတဲ့ဒေသဗွက်ထပြီး နွေမှာဖုန်ထူတာ မဆန်းပါ။ မမြင်ချင်ရင်တော့ အဲဒါတွေပြုပြင်ရပါမယ်။
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များအတွင်း နေ့ချင်းပြန် ကားရထား ဆက်သွယ်ရေးလမ်းတွေ မရှိ ယာဉ်စနစ်တွေမရှိ လူတွေကို အားလပ်ချိန်ခရီးထွက်ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားတဲ့ တိုက်တွန်းမှု စနစ်တွေမရှိတော့ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတနည်း ထိတွေ့မှုတွေနည်းပြီး သူ့ဓလေ့ ကိုယ့်ဓလေ့မသိ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမရနိုင်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည် #နယ်နိမိတ်ပတ်လမ်း ကား ရထားလမ်း ရှိရင် မိုက်မလားပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းတွေ ညံ့တာ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေပါတယ်။ တနာရီနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့နည်းပညာ လူသားတွေမှာရှိပေမယ့် ကိုယ်တို့သုံးနိုင်တာ ၅ နာရီဆို လမ်းတင်အချိန်ကုန်လို့ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု နိမ့်ကျမှု တခေါက်ကို လေးနာရီပါ။
အလွယ်ဆုံးဥပမာ ငွေကြေးနဲ့ဖလှယ်ပြရရင် ၁ နာရီခရီးကို ငါးနာရီသွားရတော့ ယာဉ်စီးခ ပိုပေးရပါတယ် ၁နာရီတထောင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင် ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်စည်ကပေးလိုက်ရတဲ့ အပိုဖြုန်းမှု ၄၀၀၀ ကျပ်ဟာ ခရီးသည်ပေးလိုက်ရပေမယ့် ယာဉ်သမားက တကယ်မရပါဘူး သူ့အတွက်က ၁ နာရီ ၁၀၀၀ နဲ့ ၅ နာရီမို့ ၅၀၀၀ ကျပ်ပါပဲ။ တန်ရာတန်ကြေးပါ။ ဒါဆို အဲဒီ အပို ၄၀၀၀ ကျပ်ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု စနစ်ထဲမှာလည်းမရှိသလို ပြည်ပထွက်သွားတာလဲမဟုတ်ပါ။ အပိုလေလွင့်မှု လုပ်အားဆုံးရှုံးမှုပါ။
အခေါက်ပေါင်းများစွာစီးဆင်းနေတဲ့ ကုန်စည်တွေ အတွက်ဆို တိုင်းပြည်ဟာ နေ့စဉ် ဘီလီယံနဲ့ချီလေလွင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်မိသလောက်ဆို တက္ကစီ စီးပြီး ကားကြပ်လို့ ၂ နာရီနဲ့မရောက်နိုင်ပဲ လေးနာရီလောက်ကြာခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသွား ခရီးသည်တယောက်အတွက် လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏတွက်ကြည့်ဖူးတာ။ အကြမ်းခန့်မှန်းချေ တက္ကစီအရေအတွက်နဲ့ ချကြည့်တော့တက္ကစီ ကဏ္ဍမှာ ရန်ကုန်တမြို့ထဲတင် တရက် သိန်း ၄၀၀၀ လောက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နေပါတယ်။
KAIZEN philosophy ရဲ့Muda(Waste) ပါပဲ။ Muda Elimination ဟာ Kaizen မှာ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ဒါဟာ Productivity ကို တိုးတက်စေဖို့ လုပ်ရမယ့် KAIZEN လမ်းစဉ်ပါ။ Muda Elimination အတွက်လုပ်ရမယ့် လုပ်နေဆဲ waste ဖယ်ထုတ်ဖျောက်ဖျက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ အကြွေးတောင်းတာတွေပေါ့ :D ။ အရစ်ကျပြန်ဆပ်။ :D
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလို့ ကျေးလက်က ခြံတွေထဲ ပုပ်သွားတဲ့ သီးနှံတွေရဲ့တန်ဖိုး ရှိပါသေးတယ်။
အခုကာလဟာ Better Change or Continuous Improvement လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဂျပန်စတိုင် KAIZENရဲ့ Housekeeping 5S နဲ့ Muda Elimination (7 wastes) လုပ်ရမယ့်ကာလပါ။
Muda. Mura. Muri ပေါ့။ ဒီ Three pillars of Kaizen ကို ဘယ်လောက်များများပယ်ဖျက်လုပ်နိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်တွန်းအားပေးရမှာပါ။ ဒီသုံးခုဟာ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ waste တွေပါ manufacturing မှာတော့ Lean Method ပါပဲ။
TOYOTA ဟာ Kaizen နဲ့နာမည်ကြီးသလို GE (General Electric. USA) ဟာ Sigma Six နဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အသုံးချကြပါတယ်။
Philosophy တစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုင်စွဲပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ထုပ်လုပ်မှုစွမ်းအားများ မြှင့်တင်နိုင်ပါစေ။
(မကြာခဏလွှင့်နေလို့ မရိုးနိုင်အောင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Armageddon ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းရေးဖြစ်တာပါ Sci-fi တွေ အကြည့်များသွားပြီ :D )
အရေမရအဖတ်မရလျောက်ရေးတာ အဆုံးထိဖတ်တယ်ဆို ပျော်မှာပါ။ :D :D
Posted by မင်းညို at 9:49 PM0comments
ကျွန်တော်နဲ့ ချစ်ဇနီးရဲ့ ခြေရာလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ကာလထိ မှတ်တမ်းတင်ထားလိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး။ တချိန် ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေ အနေနဲ့ ဒီလူကြီးတွေ မြို့ သွားကျောင်းတက်ဖူးတာလေး လာကြွားတယ်ပြောလိမ့်မလား သူတို့ရော ဘယ်တွေ သွားကြလိမ့်မလဲ။
ကျွန်တော့် ဖေဖေဟာ ပြည်အထက (၃)မှာအထက်တန်းကျောင်းတက်ဖူးသူပါ။ ပြည်အထက (၅)မှာ ကျွန်တော် (၁၀) တန်းတက်တော့ တောမှာမွေး တောရွာ တွဲဖက်ကျောင်းလေးမှာ တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော် ဖေ့ဖေ့အပေါ်အထင်ကြီးစိတ် နည်းနည်းလျော့ပါတယ်။ :D ဒေသစုံအောင် သွားလာသူတွေ ငယ်ငယ်က အတော်အားကျတယ် ဒါကြောင့်ထင်တယ် ခြေဗွေပါသလိုပဲ ရောက်ရာအရပ် အခြေချ ဖို့ ကြိုးစားတိုင်းမအောင်မြင်ဖူး။ မြေပိုင်အောင်ကြိုးစားတယ် မြေ၀ယ်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်။ မြေ၀ယ်ပြီးလည်း အိမ်မဆောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ရွာမှာမွေးတဲ့ကောင် တိုက်ခန်းမနေတတ်တာတော့ ၀သီဖြစ်မယ်။ ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ နေချင်တယ်။ မန်းမှာ နေနိုင်မယ့်နေရာ ခြံဝယ် လုပ်မစားတတ်တော့ အခြေမချဖြစ် ရန်ကုန်အပေါင်းအသင်းအစုံနဲ့ နေနိုင်ဖို့ စုပြီး မြေ၀ယ်သော်လည်း ခုထိမနေနိုင်သေး။ ဆောက်တယ်ကွာ။ မရပါ ဆောက်သာဆောက်တာပါ။ နေတာက တခြား။ ရည်ရွယ်လုပ်သမျှတော့ ဆနဓိပတိနဲ့ လုပ်တာမို့ အိုင်ဒီယာ အပြည့်နဲ့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ပါ ညလည်း အိပ်ချင်တဲ့အချိန်ရယ် မရှိလောက်အောင် ဆနဇောထက်သန်ပြီးလုပ်ပါတယ်။ အိပ်မက်မှန်သမျှ အကောင်အထည်ဖော်နေတော့ လူဘ၀သက်တမ်း လူ့ ကျန်းမာရေးနဲ့မကိုက်ပါ ခုလည်း ကုမဏီမှာ အကြံပေးရာထူးယူလုပ်ခဲ့မိတော့ တသက်လုံး အကြံပေးချည်း စဉ်းစားနေမိတာ Advisor ကနေ Consultant ဖြစ်ဖို့ ကြံစည်မိပြန်ပါပြီ။ သက်တမ်းတိုမယ်ဆိုတာတော့ သေချာသလောက်ပါပဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်သေသွားတာ ဘ၀အောင်ျြမင်မှုလားတော့ နားမလည် :D ကလေးတွေ ငယ်သေးလို့ ပြန်ချင့်ချိန်မှပါဗျာ။
Posted by မင်းညို at 7:26 PM0comments
Two Sisters Art Gallery
By Artist Khin Lun Eain (Grade I)
By Artist Khin Hnin San(KG)
Location : Nawaday Garden Estate, Yangon.
Open: Weekends Only (8:00 am - 3:00pm)
***Any part of our creations are not allowed to copy and publish without prior written request and our permission.***
Overtine Competition (2018)
Posted by မင်းညို at 7:29 AM0comments
ငါတို့စိုဖို့အသငျ့ရှိနတေယျ ... -
ကျင့်စဉ်အမှန် မဟာသတိပဌာန် - https://www.scribd.com/doc/282631763/MahaSatiPathan